အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရကြွယ်ဝစေဖို့ - Myanmar Network
Posted by Language Republic on September 27, 2012 at 10:08 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ယခု အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ဝေါဟာရ ကြွယ်ဝရေး ဆောင်းပါးမှာ vocabulary တိုးပွားအောင် လုပ်နည်း၊ vocabulary တိုးပွားအောင် လုပ်ရာမှာ စာဖတ်ခြင်းက အရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်း ပါဝင်ပုံ၊ vocabulary ကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဘယ်အခါမှာ အသုံးပြုရမယ်ဆိုတာ သိခြင်း၊ ဝေါဟာရအသီးသီးကို အသုံးမပြုမီ စဉ်းစားရမယ့် မေးခွန်းတွေနဲ့ vocabulary ပိုင်နိုင်ဖို့ အကြံပြုချက်တွေကို လေ့လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
vocabulary ကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဘယ်အခါမှာ အသုံးပြုရမယ်ဆိုတာ သိခြင်း
vocabulary တိုးပွားလာတဲ့အခါ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုတာ လေ့လာသင်ယူဖို့ အရေးကြီး ပါတယ်။ စာလုံးကြီးကြီးတွေ သိရုံနဲ့ အသုံးအနှုန်း မကျွမ်းကျင်သေးဘူး။ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လို သုံးရတယ် ဆိုတာလည်း တတ်သိနားလည်ဖို့ လိုသေးတယ်။
စကားလုံးကို သုံးနည်းမှားတဲ့အခါ အဓိပ္ပာယ်မရှိဘဲလည်း ဖြစ်တတ်တယ်။ အဆက်အစပ်လွဲတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ စာဖတ်သူတွေ နားထောင်သူတွေကိုလည်း သိဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ဘယ်လိုဝေါဟာရတွေကို သိကြသလဲဆိုတာလည်း နားလည်ရမယ်။ ဒါမှ အခြေအနေနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် ဝေါဟာရတွေကို ရွေးသုံးနိုင်မယ်။ ဝေါဟာရရွေးချယ်စရာ များပြားစေဖို့ နေ့စဉ် ဝေါဟာရအသစ် လေ့လာသင်ယူရမယ်။
စကားလုံးအဆန်းကိုတော့ သုံးပါရဲ့၊ မသုံးတတ်ကြောင်း သိသာနေတာမျိုး ကြုံဖူးပါသလား။ ရှက်စရာ ကောင်းတာပေါ့။ စကားလုံးအဆန်းကို မသုံးတတ်ဘဲ သုံးတာဟာ သဒ္ဒါမှားသလိုဘဲ အမြင်ဆိုး အကြားဆိုးပါတယ်။ တော်သလို တတ်သလို ဟိတ်ဟန်ထုတ်တာကို အခြားသူတွေက အလွယ်နဲ့ သိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စကားလုံးတစ်လုံးကို မှန်မှန်ကန်ကန် မသုံးတတ်ရင် လုံးဝမသုံးတာက အကောင်းဆုံးဘဲ၊ ရမ်းသုံးလိုက်တိုင်း အမှားအယွင်း ဖြစ်မှာပါ။ မှားနေတာကို သိတဲ့ အချို့လူတွေက ပြင်ပေးကြမယ်။ ဒါဆို ရှက်စရာ ကောင်းပြန်ရော။
စကားလုံးတွေကို သုံးတော့မယ်ဆိုရင် စဉ်းစားရမယ့် မေးခွန်းများ
စကားလုံးတစ်လုံးကို စာရေးသားရာမှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ စကားပြောရာမှာဖြစ်ဖြစ် အသုံးမပြုခင် အောက်ဖော်ပြပါ မေးခွန်းများကို စဉ်းစားပြီး အဖြေရှာရမယ်။
• ဒီစကားလုံးကို သုံးဖို့ လိုအပ်သလား။
• လုပ်ငန်းသုံး သီးခြား ဝေါဟာရတွေကို သုံးဖို့ အာရုံထားရမလား။
• ဒီစကားလုံးတွေက နားထောင်သူ ဖတ်ရှုသူတွေနဲ့ သင့်တော်မှာလား။
• ဝေါဟာရ အခုထက်ပိုပြီး ကြွယ်ဝအောင် ဘယ်လို တိုးမြှင့်နိုင်မလဲ။
ဒီမေးခွန်းတွေကို ကောင်းကောင်း ဖြေနိုင်မယ်ဆိုရင် ဝေါဟာရကြွယ်အောင် လုပ်နိုင်ဖို့ အထောက်အကူ ပြုမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒီမေးခွန်းတွေကို မစဉ်းစားတဲ့အတွက်ကြောင့် ဝေါဟာရကြွယ် အောင် မလုပ်နိုင်ကြတာ ဖြစ်တယ်။
တစ်ခါတစ်ရံ အချို့ စကားလုံးတွေကို သုံးဖို့ မလိုအပ်ဘူး။ စကားလုံးကြီးကြီး တစ်လုံးကို သုံးမယ်ဆိုရင် သဘာဝကျကျ အလိုက်သင့် သုံးရတယ်။ စကားပြောရင်လည်း ဒီအတိုင်းဘဲ၊ စာရေးရင်လည်း ဒီအတိုင်းဘဲ။ နားထောင်နေသူတွေ၊ စာဖတ်သူတွေက သဘာဝကျကျ သုံးထားတာ ဟုတ်မဟုတ် သိကြတယ်။
ဝေါဟာရတွေကို ကောင်းမွန်စွာ သုံးနိုင်အောင် ဘယ်အချိန်မှာ သုံးရမယ်၊ ဘယ်အချိန်မှာ မသုံးရဘူး ဆိုပြီး သိရတယ်။ ကိုယ့်လုပ်ငန်းထဲက မဟုတ်သူတွေနဲ့ ပြောတဲ့အခါ လုပ်ငန်းထဲမှာဘဲ သီးခြားအသုံးပြုတဲ့ စကားလုံးတွေကို ရှောင်ရှားရမယ်။ ပညာတတ်တွေနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ အဆင့်မြင့်တဲ့ ဝေါဟာရတွေကို သုံးရမယ်။
ဒါပေမယ့် သာမန်လူတွေနဲ့ ပြောဆိုတဲ့အခါ သိပ်အဆင့်မမြင့်တဲ့ ဝေါဟာရတွေကို သုံးသင့်ပါတယ်။ တစ်ဖက်သားကို ခပ်တုံးတုံးလို့ သဘောထားပြီး စကားပြောဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလိုပြောရင် တစ်ဖက်သားကို စော်ကားသလို ဖြစ်မှာပေါ့။ နားလည်လွယ်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ပြောဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဝေါဟာရ အသုံးအနှုန်း ကျွမ်းကျင်သူဟာ ပုတ်သင်လိုဘဲ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လိုက်လျောအောင် အံဝင်ခွင်ကျ ပြောင်းတတ် ရတယ်။ ဝေါဟာရကြွယ်ဝသူကလည်း ဒီလိုဘဲ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သင့်တော်အောင် ရွေးချယ် သုံးနှုန်းတတ်ရတယ်။ ဝေါဟာရကျွမ်းကျင်ချင်ရင် ပုတ်သင်လို ကျင့်ကြံပါ။ ပုတ်သင်လို ကျင့်ကြံတတ် အောင်လည်း လေ့လာသင်ယူထားပါ။
သတိပြုရမယ့် အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ချက်ကတော့ ဆန်းပြားတဲ့ စကားလုံးတွေ သုံးရုံနဲ့ မလုံလောက်ဘူး ဆိုတာပါဘဲ။ စကားလုံးအဆန်းသုံးရုံနဲ့ ဝေါဟာရကြွယ်တာ မဟုတ်ဘူး။ အံဝင်ခွင်ကျ မှန်မှန်ကန်ကန် မသုံးတတ်ရင် ကို့ရို့ကားယား ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ဝေါဟာရကြွယ်သည့်တိုင် ပရိတ်သတ်နဲ့ အံမ၀င်ရင် ပြောချင်တဲ့အချက်တွေကို နားလည်မှာ မဟုတ်ဘူး။ စာရေးဆရာတစ်ယောက်က လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုက ဝေါဟာရတွေကို တွင်တွင်သုံးပြီး ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ဆိုရင် အဲဒီလုပ်ငန်းနယ်ပယ်က မဟုတ်သူတွေ ဖတ်လို့ နှစ်သက်မှုရမှာ မဟုတ်ဘူး။ တမင်အဲဒီအတိုင်း ရည်ရွယ်ပြီး ရေးတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သာမန်လူတွေ ဖတ်လို့တော့ နားမလည်ဘူးပေါ့။
ဒီအချက်အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုကတော့ သိပ္ပံအကြောင်း ရေးသားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက သူတို့ရဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တွေကို ပြည်သူလူထု နားလည်အောင် စာအုပ်တွေ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေကြတာ ခေတ်စားလာတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်အချင်းချင်းဘဲ နားလည်မယ့် ပညာရပ်ပိုင်း စာအုပ်တွေ ရေးမယ့်အစား သာမန်လူတွေ နားလည်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းမျိုးနဲ့ ရေးကြတာဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ် အကျိုးရှိသွားတယ်။ ပထမဆုံး သိပ္ပံ အယူအဆတွေကို နားလည်လာကြမယ်။ ပြီးတော့ စာရေးသူလည်း လူသိများ ထင်ရှားသူ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
www.exforsys.com မှ "Enhancing Your Vocabulary" ဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Permalink Reply by 36t649t4cx51y on September 27, 2012 at 12:26
Permalink Reply by 2d9xpxcke05p9 on September 27, 2012 at 14:02
Thank you and very good for us.
Permalink Reply by khaing khaing soe on September 27, 2012 at 17:49
Permalink Reply by Mr Lwin Tunn on November 5, 2012 at 21:57
Permalink Reply by zay ya on September 27, 2012 at 19:50
Permalink Reply by thant zin tun on September 27, 2012 at 23:14
Permalink Reply by kyawmyooo on September 28, 2012 at 0:42
Permalink Reply by khinthidasoe on September 28, 2012 at 21:40
Permalink Reply by Su Thet on September 29, 2012 at 0:03
Permalink Reply by thurainoo on October 3, 2012 at 17:05
i am thurainoo/ i want to friendly whit you. this is my talk account (thurainoo26@gmail.com)
Permalink Reply by Tina on September 29, 2012 at 1:09
Permalink Reply by drsaithuhan on September 29, 2012 at 13:00
u give alot of knowledge to me.